ပိုင်ဆိုင်မှုအကာအကွယ်ပေးခြင်းနှင့်ဒါနများအတွက် seychelles ဖောင်ဒေးရှင်းမှဖွဲ့စည်းခြင်း
တစ်ဦးကဆေးရှဲ Foundation မှတစ်မိသားစုတစ်ခုသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂလိကအခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ 2009 ၏ဆေးရှဲဖောင်ဒေးရှင်းမှအက်ဥပဒေရိုးအမြစ်များ၏ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများကိုအုပ်ချုပ်။ နိုင်ငံခြားသားတွေကသူတို့မူလအမြစ်ကိုဖွဲ့စည်းပြီးနှင့်ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။
တစ်ဦးကဆေးရှဲအခြေခံအုတ်မြစ်ပနားမားကဲ့သို့သောအခြားနိုင်ငံများတွင်တွေ့ရှိရအကျိုးကျေးဇူးများအများအပြားထောက်ပံ့ပေးပေမယ့်သူ / သူမ၏အခွင့်အရေးများ assign ဖို့တည်ထောင်သူများ၏စွမ်းရည်များကဲ့သို့တိုးမြှင့်အခွင့်အရေးများပေးသညျ။ အမှီတကဲအမျိုးအစားများနှင့်အသုံးပြုမှုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အထူးပြုကုသိုလ်ဖြစ်, ပုဂ္ဂလိကအကျိုးစီးပွားများကဲ့သို့ရိုးအမြစ်ကို, မိသားစုပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်တိကျသောရည်ရွယ်ချက်များကိုဖွဲ့စည်းဖို့အတွက်ဆေးရှဲတစ်ခုစံပြတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ကိုမှန်ကန်စေသည်။
သီးခြားဥပဒေရေးရာ entity သကဲ့သို့, အခြေခံအုတ်မြစ်လွှဲပြောင်းပိုင်ဆိုင်မှုအခြေခံအုတ်မြစ်များ၏သီးသန့်အိမ်ခြံမြေဖြစ်လာသည်။ ဒါဟာသူ / သူမ၏ဟောင်းတဦးပိုင်ဆိုင်မှုများကိုမဆိုအဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သောပိုင်ဆိုင်မှုများမှတည်ထောင်သူထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အလားတူထုံးစံမှာအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများပိုင်ဆိုင်မှုသို့မဟုတ်အခြေခံအုတ်မြစ်ပိုင်ရှင်များစဉ်းစားကြသည်မဟုတ်။ ထို့အပြင်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများအခြေခံအုတ်မြစ်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုသို့မဟုတ်တိုက်မြစ်ကိုမဆိုထိန်းချုပ်မှုမှမဆိုဥပဒေအရသို့မဟုတ်အကျိုးရှိသောအခွင့်အရေးများရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး။
ဆေးရှဲသမ္မတနိုင်ငံဒါဂတ်စကာအနီးအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာအတွင်းရှိ 115 ကျွန်းများပါဝင်သည်ဟုနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ 1976 အတွက်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းထံမှလွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့သည်။ ၎င်း၏နိုင်ငံရေးဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုရွေးချယ်တင်မြှောက်အမျိုးသားရေးစည်းဝေးပွဲကိုပြီးသမ္မတနှင့်အတူတစ်ပေါင်းတစ်စည်းတည်းသမ္မတရွေးကောက်ပွဲသမ္မတနိုင်ငံအဖြစ်ဖော်ပြနေသည်။
seychelles Foundation မှအကျိုးကျေးဇူးများ
• နိုင်ငံခြားရေးပိုင်ဆိုင်မှု: နိုင်ငံခြားသားများရိုးအမြစ်ကိုဖွဲ့စည်းပြီးနှင့်စုစုပေါင်းထိန်းချုပ်မှုကိုထိန်းသိမ်းရန်နိုင်ပါတယ်။
• အဘယ်သူမျှမ အခွန်ကောက်ခံမှု: seychelles အခြေခံအုတ်မြစ်များပေါ်တွင်မည်သည့်အခွန်စည်းကြပ်မထားဘူး။ မှတ်ချက်အမေရိကန်အခွန်ထမ်းနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝင်ငွေအခွန်နိုင်ငံတွေဆီကနေသူတို့အခွန်အာဏာပိုင်များအားလုံးကိုဝင်ငွေထုတ်ဖေါ်ရမည်ဖြစ်သည်။
• ပိုင်ဆိုင်မှုအကာအကွယ်ပေးခြင်း: အမှီတကဲတို့သည်တည်ထောင်သူနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုကနေအကျိုးခံစားရသူများ shields သောပစ္စည်းအားလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သီးခြားဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်ကြသည်။
• အိမ်ခြံမြေစီမံကိန်း: အခြေခံအုတ်မြစ်အားလုံးပိုင်ဆိုင်မှုကိုပိုင်ဆိုင်နှင့်တည်ထောင်သူရဲ့အမွေခံဖို့နဲ့သူတို့ရဲ့အမွေခံခြင်းငှါသူတို့ဖြန့်ဝေဖို့ညွှန်ကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်ကတည်းကဒီစုံလင်သောအိမ်ခြံမြေစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ စျေးကြီးများနှင့်အချိန်မီစမ်းရှောင်ရှားနိုင်ပါသည်။
• သီးသန့်လုံခြုံရေး: ထိုတည်ထောင်သူ၏အမည်များ, အကျိုးခံစားရသူများ, ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်နှင့်ကာကွယ်ပေးသူအများပြည်သူမှတ်တမ်းများထဲကထွက်ခွာသွားနိုင်ပါတယ်။
• ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်: များစွာသောအမျိုးအစားများနှင့်ရရှိနိုင်ပါရိုးအမြစ်၏ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်။
• အနိမ့်မှတ်ပုံတင်ခြင်းခ: လောလောဆယ်ကြောင့်သာအခြေခံအုတ်မြစ်မှတ်ပုံတင်ရန် $ 200 အမေရိကန်ဒေါ်လာကုန်ကျသည်။
• အနိမ့်နိမ့်မြို့တော်: အဲဒီမှာတိုက်မြစ်နိမ့်ဆုံးမြို့တော်လိုအပ်ချက် $ 1 အမေရိကန်ဒေါ်လာဖြစ်ပါတယ်။
• အစာရှောင်ခြင်းဖွဲ့စည်းခြင်း: အဆိုပါဖောင်ဒေးရှင်းဦးတည်းမှသုံးရက်အတွင်းဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းနှင့်မှတ်ပုံတင်နိုင်ပါသည်။
• အင်္ဂလိပ်: ဟောင်းတစ်ဦးယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းပိုင်နက်အဖြစ်, အဆိုပါအရာရှိကသင်သည်ဘာသာစကား English ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးကဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့နာမညျကိုအတူတူပင်ဖြစ်ပါသို့မဟုတ်ဆေးရှဲအတွက်အခြားမည်သည့်ဥပဒေရေးရာ entity တူမပြုရပါ။ အဆိုပါအမည်စကားလုံး "ဖောင်ဒေးရှင်းက" ပါဝင်ရမည်။
တစ်ဦးကဆေးရှဲဖောင်ဒေးရှင်းတည်ထောင်သူကနေလွှဲပြောင်းအားလုံးပိုင်ဆိုင်မှုများကိုပိုင်ဆိုင်သီးခြားဥပဒေရေးရာ entity ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါတည်ထောင်သူမအကျိုးခံစားရသူများမပိုင်ဆိုင်မှုများကိုမဆိုပိုင်ဆိုင်တယ်။ ဤသည်ယခင်ပိုင်ရှင် (များ) မှအားလုံးပိုင်ဆိုင်မှု insulates ။
အဆိုပါတည်ထောင်သူရဲ့အကြွေးအခြေခံအုတ်မြစ်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုမဆိုဖမ်းဆုပ်လို့မရဘူး။ အကြွေးများယူဆောင်မဆိုတောင်းဆိုမှုများပိုင်ဆိုင်မှုအခြေခံအုတ်မြစ်လွှဲပြောင်းခဲ့သည်ရက်စွဲကနေနှစ်နှစ်အတွင်းတင်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။ တစ်ခုသာဆေးရှဲတရားရုံးအခြေခံအုတ်မြစ်ပိုင်ဆိုင်မှုများဖမ်းဆီးရမိမိန့်ပေးနိုင်သည်။
အဆိုပါတည်ထောင်သူနောက်ပိုင်းတွင်အခြေခံအုတ်မြစ်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုသူ / သူမ၏အမွေခံနှင့်အမွေခံ၏နောက်မျိုးဆက်ကနေလွန်နိုင်ချိန်တွင်သတ်မှတ်နှင့်နိုင်ပါတယ်။ သို့မဟုတ်တစ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအိမ်ခြံမြေနောက်ကွယ်မှထွက်ခွာပါလိမ့်မယ်တစ်ဦး testamentary ဘို့မလိုအပ်ရှိပါသည်။ seychelles ဥပဒေများ heirship အတင်းအကျပ်အခြားနိုင်ငံများမှဥပဒေများလျှောက်ထားမသတ်မှတ်။
အောက်ပါရိုးအမြစ်နှင့်အတူ privacy ကိုအောင်မြင်ရန်နည်းလမ်းများနေသောခေါင်းစဉ်:
•ဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့စည်းမျဉ်းအဆိုပါမှတ်ပုံတင်အရာရှိသို့မဟုတ်မည်သည့်အစိုးရအေဂျင်စီနှင့်အတူတင်သွင်းခံရဖို့ရှိသည်ပါဘူး။ ဤစာရွက်စာတမ်းတည်ထောင်သူ, ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များ, ကာကွယ်ပေးသူများ၏အမည်များဆံ့နှင့်သူ၏အမည်များကိုအစိုးရကနှင့်အတူတင်သွင်းခံရဖို့မလိုအပ်ပါအကျိုးခံစားရသူများဖြစ်နိုင်သည်။
(ကဘာသာပြန်ချက်နှင့်အတူတင်သွင်းလျှင်) အဆိုပါပဋိညာဉ်စာတမ်း English သို့မဟုတ် French သို့မဟုတ်အခြားဘာသာစကား၌ရေးထားလျက်ရှိ၏နိုင်ပါသည်။ ဒါကတည်ထောင်သူရဲ့အမည်, ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အခြေခံအုတ်မြစ်၏အရာဝတ္ထုပါရှိသည်သောလူသိရှင်ကြားတင်သွင်းစာရွက်စာတမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်တစ်ဦးအဖြစ်လျာထားသောတည်ထောင်သူရဲ့နာမညျကို privacy ကိုများအတွက်ပဋိညာဉ်စာတမ်းထဲမှာမူလတည်ထောင်သူကိုအစားထိုးလိမ့်မည်။
ဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့စည်းမျဉ်းများသည်လည်း၎င်း၏ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေအဖြစ်လူသိများကြသည်။ ဒါဟာမဆိုအများပြည်သူမှတ်တမ်းများအတွက်တင်သွင်းခံရဖို့ရှိသည်ပါဘူးအရာတခု optional ကိုပုဂ္ဂလိကစာရွက်စာတမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်, ထိုစည်းမျဉ်းများပိုင်ဆိုင်မှု, အကျိုးခံစားခွင့်ရပိုင်ခွင့်များကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များ, အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ, ဖြန့်ဖြူး, etc ၏သတ်မှတ်ရေးနှင့်ဝိသေသလက္ခဏာများကို
အဆိုပါလိုင်စင်ရ International Foundation မှန်ဆောင်မှုများပေးသူစာရွက်စာတမ်းများက register လုပ်သွားနှင့်တရားဝင်ဆွဲသွင်းပါဝင်အတည်ပြုလက်မှတ်ထုတ်ဝေသည့်ဆေးရှဲဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုအာဏာပိုင် (FSA) နဲ့ (တစ်ဦး option ကိုကဲ့သို့) အခြေခံအုတ်မြစ်ရဲ့ပဋိညာဉ်စာတမ်းနှင့်၎င်း၏စည်းမျဉ်း file ပါလိမ့်မယ်။
လက်ရှိမှတ်ပုံတင်ကြေးအခြေခံအုတ်မြစ်ရဲ့မှတ်ပုံတင်နှစ်ပတ်လည်နေ့နေ့စွဲအပေါ်ပေးဆောင်ခံရဖို့နှစ်စဉ်သက်တမ်းတိုးဘို့ $ 200 အမေရိကန်ဒေါ်လာနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။
ဒါကအခြေခံအုတ်မြစ်ဖန်တီးပြုလုပ်ရန်ပိုင်ဆိုင်မှုစေတယ်သူဖြစ်ပါတယ်။ တည်ထောင်သူက၎င်း၏ဖွဲ့စည်းပြီးနောက်အခြေခံအုတ်မြစ်ကျော်အာဏာကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောလုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာအခြေခံအုတ်မြစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုညွှန်ကြားဖို့, ဒါမှမဟုတ်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်အစားထိုးညာဘက်ပါဝင်နိုင်သည်။ တစ်ဦးယုံကြည်မှုကျော်အလားတူအင်အားကြီးဥပဒေရေးရာစိန်ခေါ်မှုများဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်။ တိုက်မြစ်ကိုသီးခြားဥပဒေရေးရာ entity သောကွောငျ့သို့သော်၎င်း၏တည်ထောင်သူများကကြိုးပမ်းခဲ့တယ်ထိန်းချုပ်မှုပမာဏကိုတစ်ဦးယုံကြည်မှုကိုမပြုစေခြင်းငှါအဘယ်အရပ်က "အတုအယောင်" အဖြစ်ဥပဒေရေးရာစိန်ခေါ်မှုများကိုဆီးတားနိုင်။
•တည်ထောင်သူများကသဘာဝပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းများ (ကိုး စား. , ကော်ပိုရေးရှင်း, ကုမ္ပဏီများ, အခြားအခြေခံအုတ်မြစ်, etc) ဖြစ်နိုင်ပါသည်နဲ့ (ပဋိညာဉ်စာတမ်းအများပြည်သူမှတ်တမ်းများနှင့်အမည်များကိုတည်ထောင်သူနှင့်အတူတင်သွင်းကြောင့်မကြာခဏ privacy ကိုအတွက်အသုံးပြု) တစ်ဦး "အဖြစ်လျာထားသော" ဖြစ်နိုင်သည်။
•အပဋိညာဉ်စာတမ်းသို့မဟုတ်စည်းမျဉ်းထဲမှာသူ့ကို / သူ့ကိုယ်သူသို့မဟုတ်အခြားတစ်ဦးချင်းစီအဘို့အအချို့သောအခွင့်အရေးများကိုကြိုတင်ယူထားနိုင်သလား။ ထိုသို့သောအခွင့်အရေးများအကျိုးခံစားရသူများ, ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်နှင့် Protector ခန့်အပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားခြင်းတို့ပါဝင်သည်နိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်တည်ထောင်သူ, အခြေခံအုတ်မြစ်ဖျက်သိမ်းရေး, etc ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ directing အဘို့အညာဘက်ကိုကြိုတင်ယူထားစေခြင်းငှါ
•တာဝန်ပေးအပြည့်အဝလုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့်အတူတတိယပါတီမှသူသို့မဟုတ်သူမ၏အခွင့်အရေးများ assign နိုင်သလား။
seychelles ရိုးအမြစ်ကိုပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ဦးလိုင်စင်ရ seychelles International Foundation မှန်ဆောင်မှုများပေးသူဖြစ်သည့်ဖောင်ဒေးရှင်းကောင်စီကစီမံခန့်ခွဲရသည်။ ထိုကဲ့သို့သောပံ့ပိုးပေးခန့်အပ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်, အတွေ့အကြုံရှိစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုသေချာနှင့် "အခွန်နေထိုင်" စိန်ခေါ်မှုများကိုရှောင်။
•ထိုပဋိညာဉ်စာတမ်းပါသို့မဟုတ်စည်းမျဉ်းများကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များကအမည်ပေးနိုင်သည်။ အဆိုပါစည်းမျဉ်းလူသိရှင်ကြားတင်သွင်းခံရဖို့ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးသောကြောင့်, ဒီကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များ၏ privacy ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ကောင်းတစ်ဦးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ဆေးရှဲတိုက်မြစ်တစ်ဦးကအလားအလာ option ကိုအခြေခံအုတ်မြစ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုများအားလုံးကြီးကြပ်ခြင်းနှင့်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များနှင့်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်၎င်းတို့ကိုကိုအစားထိုးနိုင်သူတစ်ဦး "ကာကွယ်ပေးသူ" ကိုခနျ့အပျဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါပဋိညာဉ်စာတမ်းပါသို့မဟုတ်စည်းမျဉ်းတိကျတဲ့ကာကွယ်ပေးသူ၏ချိန်းအမည်ကိုနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါတည်ထောင်သူ, ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးအကျိုးခံစားခွင့်အတွက်ကာကွယ်ပေးသူအဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံရပေမည်။ သို့သော်တစ်ဦးတည်းအကျိုးခံစားခွင့်သို့မဟုတ်တစ်ဝါးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တို့သည်ကာကွယ်ပေးသူအဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းမရနိုင်ပါ။
အောက်ပါသူတို့အားနှင့် ပတ်သက်. ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်စည်းမျဉ်းများကိုအမျိုးအစားများဖြစ်ကြသည်:
•ယင်းဖောင်ဒေးရှင်းက၎င်း၏ကနဦးပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအဖြစ် $ 1 အမေရိကန်ဒေါ်လာတစ်ဦးအနည်းဆုံးရှိရမည်။
•ပိုင်ဆိုင်မှုများ၏အမျိုးအစားများပါဝင်နိုင်ပါသည်: ကော်ပိုရေးရှင်းရှယ်ယာကိုမှန်ကန်ဂုဏ်သတ္တိများ, အာမခံ, ကုန်စည်, နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ရန်ပုံငွေများ, မော်တော်ယာဉ်, ရေယာဉ်များ, ဘဏ်အကောင့်များအရစ်ကျအကောင့်သို့မဟုတ်မည်သည့်အကျိုးစီးပွားသို့မဟုတ်ရပိုင်ခွင့်အခြားအခြေခံအုတ်မြစ်တစ်ခုအကျိုးခံစားခွင့်အဖြစ်။
2003 ၏နိုင်ငံတကာကော်ပိုရိတ်န်ဆောင်မှုများပေးသူအက်ဥပဒေအဆိုပါမှတ်ပုံတင်ထားသောအေးဂျင့်အဖြစ်လိုင်စင်ရ International Foundation မှန်ဆောင်မှုများပေးသူအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှအခြေခံအုတ်မြစ်အားဖြင့်ချိန်းလိုအပ်သည်။
အခြေခံအုတ်မြစ်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုစုစုပေါင်းတန်ဖိုးကိုသာမှတ်ပုံတင်သည့်အချိန်တွင် $ 1 အမေရိကန်ဒေါ်လာဖြစ်ရမည်။
အဆိုပါဖောင်ဒေးရှင်းနိုင်ငံတကာကလက်ခံနိုင်သောစာရင်းကိုင်အလေ့အထများစစ်မှန်တဲ့ဘဏ္ဍာရေးအနေအထားဖေါ်ပြခြင်းစာအုပ်များနှင့်မှတ်တမ်းများအကောင့်ကိုထိန်းသိမ်းရန်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဤသည်ကိုလက်ခံရရှိရန်ပုံငွေများ, အသုံးစရိတ်များနှင့်ဖြန့်ဖြူးခြင်းမှတ်တမ်းများပါဝင်သည်။ အဆိုပါစာအုပ်များနှင့်မှတ်တမ်းများကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များကအမိန့်ရှိလျှင်ထိန်းသိမ်းထားခြင်းနှင့်မှတ်ပုံတင်ရုံးသို့မဟုတ်အခြားတည်နေရာမှာသိမ်းဆည်းထားလိမ့်မည်။ အဆိုပါစာအုပ်များနှင့်မှတ်တမ်းများကိုသိုထားလျက်ရှိရာအရပ်, မှတ်ပုံတင်အေးဂျင့်ကိုအမြဲအကြောင်းကြားပါလိမ့်မည်။
အဘယ်သူမျှမလိုအပ်တဲ့စာရင်းစစ်ရှိပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမနှစ်ပတ်လည်ပြန်တင်သွင်းခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမနှစ်ပတ်လည်အကောင့်တင်သွင်းခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
အဆိုပါဆေးရှဲ၎င်းတို့၏အခြေခံအုတ်မြစ်များပေါ်တွင်မည်သည့်အခွန်စည်းကြပ်မထားဘူး။ အဘယ်သူမျှမဝင်ငွေအခွန်မျှမြို့တော်အကျိုးအမြတ်အခွန်မျှကော်ပိုရိတ်အခွန်မဖြန့်ဝေအပေါ်အဘယ်သူမျှမအခွန်ရှောင်အခွန်မျှတံဆိပ်ခေါင်းတာဝန်များကို, အမွေမခံရအခွန်မျှဆုကြေးဇူးကိုအခွန်နှင့်အမြစ်အဘို့အဘယ်သူမျှမအိမ်ခြံမြေအခွန်။
အဆိုပါဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ပဋိညာဉ်စာတမ်းဟာတည်ထောင်သူရဲ့နာမညျကိုမဆံ့တံ့သောမှတ်ပုံတင်နှင့်အတူတင်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။ sine ဒီအများပြည်သူမှတ်တမ်းများအတွက်တင်သွင်းသည့်တည်ထောင်သူရဲ့နာမည်တစ်ခုတည်းသောစာရွက်စာတမ်းဖြစ်ပါသည်, အမြစ်ကိုမူလတည်ထောင်သူ၏ privacy ကိုများအတွက်ပဋိညာဉ်စာတမ်းထဲမှာဆန်ခါတင်တည်ထောင်သူရဲ့နာမညျကိုသုံးနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါအကျိုးခံစားရသူများ, ကာကွယ်ပေးသူများနှင့်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များ၏အမည်များမဆိုအများပြည်သူမှတ်တမ်းများအတွက်တင်သွင်းခံရဖို့ရှိသည်ပါဘူး။
တဦးတည်းမှသုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလက်ထက် မှစ. ယူမယ့်အခြေခံအုတ်မြစ်များဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်မှတ်ပုံတင်ဘို့မျှော်လင့်ထား။
နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု, ဖောင်ဒေးရှင်းအမျိုးအစားများနှင့်အတူပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, အဘယ်သူမျှအခွန်, ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, အိမ်ခြံမြေစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း, privacy ကိုနိမ့်နိမ့်ဆုံးမြို့တော်, အနိမ့်မှတ်ပုံတင်ကြေးမြန်ဆန်ဖွဲ့စည်းခြင်း, နှင့်အင်္ဂလိပ်တရားဝင်ဘာသာစကားဖြစ်ပါသည်: တစ်ဦးကဆေးရှဲဖောငျဒေးရှငျးကအောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးများကိုရှိပါတယ်။